Dibadbaxyo ka dhacaya Myanmar | Star FM
Home Caalamka Dibadbaxyo ka dhacaya Myanmar
Dibadbaxyo ka dhacaya Myanmar
Tobonaan kun oo ka mid ah shacabka dalka Myanmar ayaa maalinkii labaad isugu soo baxay waddooyinka caasimadda dalkaas ee Nay Pyi Taw halka kuwo dheeraad ah ay mudaharaadyo ka sameynayaan magaalooyinka kale.
Dadkan ayaa dhigaya dibadbax ay kaga soo horjeedaan afgembigii militari ee wadankaas ka dhacay Isniintii sidoo kalena lagu xiray Aung San Suu Kyi oo dalkaas hoggaaminaysay iyo mas’uuliyiin kale.
Sidoo kale waxaa weli hakad ku jiro isticmaalka intarneetka iyo aaladaha loo adeegsado isgaarsiinta gaar ahaan baraha bulshada.
Wararka ayaa intaa ku daraya in ugu yaraan 160 qof la xiray tan iyo markii uu militariga la wareegay hoggaanka Myanmar sida laga soo xigtay ergayga gaarka ah ee qaramada midoobay ee dalkaas Thomas Andrews.
Previous articleXoogga dalka Soomaaliya oo howlgal ku dilay xubno Shabaab ka tirsan
Next articleDHAGEYSO:Baaritaan dhanka indhaha ah oo laga fuliyay magaalada ibraahim uureey ee Koonfurta Wajeer
Madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa la filayaa inuu shaaciyo war lagu sheegay mid wanaagsan oo ilaa 100 bilyan oo doolar ay ku kabayaan barnaamijyada...